Iningi lethu abathanda ukuhlabelela, wakhetha ukwenza izingoma zakho ozithandayo umsindo nge vocal ufushanisiwe ngokuthi abantu minusovki. Kodwa ngezinye izikhathi ithoni lapho ingoma eqoshiwe asifanele izwi. Kulokhu, kufanele wenze ushintsho iphimbo ithrekhi. Nokho, akubona bonke ngakho elula. Ngisho nezinhlelo professional lungapheli elamukelekile. Cabanga ngalokho okudingeka ukwenze ukuze uthole engcono umsindo.
Ukushintsha ukhiye: theory kancane
Ngokuvamile, ngisho nalapho esebenzisa ezifanele isofthiwe ezingeni ithoni ushintsho ngaphandle umonakalo Ngeke anhlobonhlobo kakhulu izinga umsindo kwengoma.
Kuzoba inombolo enkulu semitones. Kungenjalo, ithrekhi liyokhala nemvelo. Ungakhohlwa, emva ithoni ushintsho sithinta bonke amathuluzi uThandeka. Kulungile, uma lokhu unguZiqu izingxenye namanothi, kodwa isimo ukushaqeka zimbi kakhulu, ngoba ukwanda noma ukwehla iphimbo kanye kuyoholela ezingezona ezemvelo kakhulu. Kuyadingeka ukuba sicabangele ukuthi ushintsho futhi kuncike zonke olwalusikisela, kanye post-nemiphumela (isibonelo, setha ukubambezeleka noma Reverb etholakalayo).
Ukushintsha Esekelwa ukhiye: yini ukusetshenziswa ngokuvamile
iphimbo ushintsho inqubo ngokwalo ukusebenzisa ekhethekile-plug-okuthiwa iphimbo shifters (kusukela English Pitch shifter).
Ngakho kungenzeka hhayi kuphela ukwenza ushintsho ithoni lokushisa, kodwa futhi ukushintsha ijubane umsindo, noma ukuhlanganisa kokubili amathuluzi. Nalapha futhi, izinga ushintsho nawo owabhalwa ibanga elincane kakhulu.
Uhlelo kangcono bahlela alalelwayo futhi aphathwa kanjani
Ngakho, thina uqhubekele ingxenye esisebenzayo. Endabeni elula, kudingeka ithrekhi uqobo (mhlawumbe kokuba ngesakhiwo WAV, kunokuba MP3 ecindezeleke) futhi yiluphi uhlelo ngenxa lapho kushintsha iphimbo, noma isicelo ukuthi ine plug-in arsenal yabo. Kungcono Yiqiniso, ukusebenzisa professional kanye lulwimi professional umhleli umsindo (bona Pitch Shift Ithuluzi yakhiwe).
Phakathi amaphasela software evumela ukukhiqiza ushintsho ithoni iyiphi ithrekhi masinya, kuyafaneleka okulandelayo:
Adobe Audition (wangaphambili iphakethe Cool Hlela Pro);
Prosoniq Isikhathi Factory;
Avid Pro Amathuluzi et al.
I last izinhlelo ezine ngokuya esetshenziswa professional ukuqopha studios kanye nolwazi, kodwa namathuluzi bahlela iphimbo, futhi, kufanele.
Ukushintsha ayisihluthulelo iyiphi ithrekhi futhi yiluphi uhlelo kwenzeka ku isimiso esifanayo: lokuqala labelwe lonke ithrekhi noma ingxenye yalo, ngokuba kuyo okudingekile ukushintsha ukuphakama iphimbo, i-plugin ke uhlu kuyakhethwa Pitch Shift, inhlamvu ensimini usetha inani halftone noma amaphesenti isihlobo oyifunayo Ukubukeka phezulu noma phansi, ngemuva kwalokho isebenze inqubo yokusetha kabusha. Khona-ke ungakwazi ukulalela ithrekhi entsha bese ugcine.
Uma unikeza iseluleko esiwusizo ekugcineni, kuyafaneleka ukuthi lezi zifiki Lwezinhlelo professional akumele sithathe ngokushesha. Ngesikhathi besanda kuqala ukuthuthukiswa yalezi zinhlelo kuyinto lokusebenza ephelele Prosoniq Isikhathi Factory, ngoba ezincane kakhulu kunazo zonke vyshepredstavlennyh. Uma sikhuluma ngokuyinhloko mayelana izinga umsindo, ngaphandle amathuluzi professional lapha ongakwazi ukuzenza.
Nokho, ngezinye izikhathi ngisho ompetha okusheshayo ukufakwa iphimbo offset usebenzisa ngezidingo ezifana Amazing Slow Downer. Ngaphezu kwalokho, uma umuntu engenalo ulwazi olwanele emkhakheni ukucutshungulwa komsindo, kungenzeka ukubhekana futhi ezihlukahlukene ku-intanethi ukuthi udinga nje ukulayisha ithrekhi yakho, khetha izilungiselelo oyifunayo, ukulinda inqubo ukuguqulwa, bese ulayisha indaba kusetshenzwe kukhompyutha yakho.
Njengoba ubona, lutho nzima ngempela. Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi kwathiwa ekuqaleni. Phakamisa noma yehlisa ithoni is hhayi Kunconywa in the uhla 2-2.5 halftone ngaphezulu, kusukela lapho kudlulwe Ukwakheka kakhulu ngokucacile ulahlekelwe izinga bafunde nangendlela engokwemvelo umsindo. Kuyefana nasendleleni izinga. Kungenzeka ukushintsha ukuba ngaphakathi 10 bpm (amabhithi ngeminithi). Uma zisetshenziswa amabili yila mathuluzi parallel, ezahlukene izilungiselelo kungenzeka is kakhulu ziyancipha.
Yini i-HTML futhi lokho "ukudla" ...
Indlela ukudala i-HTML-imeyili: igxathu negxathu Umhlahlandlela
Yiziphi tags? Yiya wena ...
Izinhlobo zokuhlola isofthiwe
Indlela ukwazi ukukhuluma nokubhala kahle igama elithi "Umhubhe" futhi "Umhubhe"? Uyini Umhubhe? Yiziphi Imigudu?
Anna Khil'kevich: Biography futhi amaqiniso athakazelisayo zokuphila
Izithombe odongeni - a lokubhalela enkulu
"Isitolo se-Antiquities", uDickens: isifinyeto
Amatshe ama-Aries angabesifazane. Izakhiwo ezingamanga
"Flucostat" ngoba amadoda - ikakhulukazi ukusetshenziswa
Universal Party: definition, izici, imisebenzi nezibonelo